Okwu Mmalite - Hangzhou Savgood Technology Co., Ltd.
Teknụzụ Savgood - Emepụta Igwefoto Igwefoto igwefoto.
Hangzhou Savgood guzobere na Mee, 2013. Anyị na-agba mbọ iji nye ọkachamara CCTV ngwọta.
Afọ ndị mbụ, anyị na-ekesa ngwaahịa Hikvision na Dahua nke Bekee, na-ebupụ ha na mba ofesi, North America, Europe, Aisa na Africa. Anyị bụ otu n'ime ndị na-eweta ọla edo 10 kacha elu na ngalaba nchekwa na Alibaba.com.
Site na 2016 Afọ, anyị hụrụ mOzo nke ihe ngbanye Ogologo uzo na-eji igwefoto igbe di na igwe eji agba ocha, nke di oke onu ahia, adighi adi nma ma di ala.
Iji dozie nsogbu dị ugbu a nke Long Camera Zoom solution, dabere na SONY a ma ama, ogo dị elu na ọkụ ọkụ ọkụ Exmor / Exmor R CMOS Sensor, Savgood Team na ndị na-ebute ngwaahịa bidoro imepụta ma zụlite ọtụtụ ụdị Igwe Mbugharị Igwefoto, lekwasị anya na Ultra LONG Mgbapụta ZOM igwefoto igwefoto. A tọhapụrụ ọtụtụ modulu nke ọma, dịka ọmụmaatụ, 4Mp 88x Zoom (10.5 ~ 920mm), 2Mp 80x Zoom (15 ~ 1200mm), 2Mp / 4K / 8Mp 50x Zoom (6 ~ 300mm), Network & Digital version.
Ha nwere ike ịkwado ngwa ngwa nke onwe anyị nke ọma na algorithm, ọrụ Defog na IVS (Intelligent Video Surveillance), usoro Onvif, HTTP API maka ntinye nke sistemụ nke atọ.
Ọzọkwa, ugbu a ihe ngwọta igwefoto ọkụ bụ analog ugbu a, ọ bụrụ na achọrọ ngwọta netwọkụ, ọ chọrọ sava vidiyo dijitalụ iji tọghata video anglog na Network, nke ụgwọ ya dị elu, na vidiyo ahụ ka njọ, njikwa bụ igbu oge. Otu ndị nchekwa anyị na ndị na - eweta anyị makwara ma mepụta modulu IP maka igwe eserese igwe eji arụ ọrụ.
Ugbu a niile nke mbugharị igwefoto igwefoto na igwefoto igwefoto igwe na-ere ya na ọtụtụ mba ofesi, United States, Canada, Britain, Germany, Israel, Turkey, India, South Korea wdg. A na-eji ha eme ihe na ngwaahịa CCTV, Ngwaọrụ ndị agha, Ahụike. equipments, Industrial akụrụngwa, Robot akụrụngwa wdg
Na dabere na nke anyị anya anya mbugharị igwefoto na modul igwefoto thermal, anyị jikọtara ụfọdụ ngwaahịa asọmpi, PTZ Cameras, Drone Gimbal ese foto wdg Anyị nwekwara ike ịme ọrụ OEM & ODM dabere na ihe ị chọrọ.